Winston Churchill ၏စာပိုဒ် ၁၂ ခုနှင့်စပ်စုသောအချက် ၄ ချက် | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Winston Churchill သေဆုံးပြီးနောက်ယနေ့အချိန်သည် (၄၉) နှစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသူမမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာသူနဲ့ပါတ်သက်ပြီးသိချင်ဆုံးအဖြစ်အပျက်အချို့၊ သူရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသောစကားစုများနှင့်ရုပ်ပုံလေးခုကိုကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုဂုဏ်တင်ချင်ခဲ့တယ်။
2 12 စာကြောင်းများ
1) ဓာတ်ပုံဆရာ Yousef Karsh Winston Churchill ၏ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ယူဆတ်သည်သူ့ကိုမရိုက်ကူးမီ၊ သူသည်လမ်းလျှောက်သွားပြီး Churchill ၏ပါးစပ်မှစီးကရက်ကိုတိုက်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ သူ၏အဆင်မပြေပုံသည်ဓာတ်ပုံတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Fuentes
2) ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တားမြစ်ထားစဉ်အတွင်း ၀ င်းစတန်ချာချီသည်အရက်ကိုတားမြစ်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားရည်ညွှန်းခဲ့သည် "လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအားစော်ကားမှု"။ Churchill သည် Scotch ဝီစကီကိုနှစ်သက်သည်။ Fuentes
(၃) Churchill ၏တောက်ပသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုသူသည်စကားထစ်သူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ဤချို့တဲ့မှုကိုအပြည့်အဝကျော်လွှားနိုင်ရန်မည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်ကိုသူသိသည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းအချို့ကိုဆွေးနွေးရန်ခေါင်းစဉ်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်သူ၏ထစ်ငေါ့ခြင်းမပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါ။ Fuentes
4) ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးသမ္မတအက်စတိုသည်ဗြိတိန် ၀ န်ကြီးချုပ် ၀ င်းစတန်ချာချီနှင့်အမြဲတမ်းကွဲလွဲနေသည်။ အငြင်းပွါးမှုတစ်ခုအနေဖြင့် Lady Astor ကသူမဇနီးဖြစ်ပါကသူမလက်ဖက်ရည်တွင်အဆိပ်ဖြစ်စေမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Churchill က «အမ်မ၊ မင်းသာမင်းရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့ရင်ငါသောက်မယ်».
3) Churchill သည်အလွန်အကောင်းမြင်တတ်သူဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဤကဲ့သို့သောစကားစုများဖြင့်ပြသခဲ့သည် - “ အကောင်းမြင်သမားသည်ဘေးအန္တရာယ်တိုင်း၌အခွင့်အလမ်းကိုမြင်သည်။ အဆိုးမြင်သမားတစ် ဦး သည်အခွင့်အလမ်းတိုင်းတွင်ဘေးဆိုးကျရောက်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ».
6) အောင်မြင်မှုသည်နောက်ဆုံးမဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကဆက်လုပ်ဖို့သတ္တိပဲ ".
8) "အကယ်၍ ပစ္စုပ္ပန်အတိတ်ကာလကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားပါကအနာဂတ်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်".
9) “ နိုင်ငံရေးသမားကမနက်ဖြန်၊ နောက်လနှင့်နောက်နှစ်တွင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းရှင်းပြနိုင်ရမည်။.
11) "ငါထာဝရအသက်ရှင်ချင်တယ်၊ အနည်းဆုံးနှစ် ၁၀၀ အတွင်းလူတွေဟာငါနဲ့အတူတူအမှားလုပ်မိကြတာကိုကြည့်ချင်တယ်".
၁) Winston Churchill လူငယ်တစ်ယောက်။
Churchill သည် ၂၁ နှစ်အရွယ်အရာရှိတ ဦး ဖြစ်သည့် ၁၈၉၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သည်။ Fuentes
၂) Churchill သည်ကြောင်ကိုချစ်သောသူဖြစ်သည်။
Churchill ၌သူ၏ဘဝ၌ကြောင်များစွာရှိသည်။ သူအကြိုက်ဆုံးကတော့ Jock လို့ခေါ်တယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအတွင်းမှာသူဟာသူ့ကိုအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ သူ့ကိုနေရာတိုင်းခေါ်သွားတယ်။
(၃) Churchill သည် ၁၉၄၅၊ ဘာလင်ရှိဟစ်တလာ၏ဘန်ကာတွင်ပျက်စီးသွားသောကုလားထိုင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၇) အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ၁၈၈၁ တွင် Winston Churchill၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Winston Churchill ၏စာပိုဒ် ၁၂ ခုနှင့်စပ်စုသော ၄ ချက်နှင့်ထူးခြားချက် (ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံများ)
Wiston Churchill ၏ဘဝနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစုစည်းမှု။ သူတို့ကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်
သေးငယ်တဲ့တော်လှန်ရေးများ၏စာအုပ်: သင်၏အသက်တာကိုတိုးတက်စေရန် 250 အမြန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်